Maitiro ekuvandudza yako yekumba WiFi kufukidza uchishandisa WiFi PLC | IPhone nhau
Maitiro ekuvandudza yako yekumba WiFi kufukidza uchishandisa WiFi PLC
Isu takatokurukura pane dzinoverengeka maitiro ekuvandudza yako yepamhepo WiFi network nekusarudza yakanakisa inowanikwa chiteshi kana kushandisa WiFi inodzokorora Nhasi tichaenda nhanho imwe kumberi uye isu ticha tsanangura kwauri kuti ungatora sei chiratidzo kubva kune yako WiFi network kuenda kunzvimbo idzo dzisingasvike nemhando yakakwana uye zvichingodaro. kukwanisa kunakidzwa neinternet mukona yega yega yeimba, uye tichazviita nekuda kwemimwe michina inonzi "PLC WiFi". Ini ndinotsanangura pazasi zvavari uye nemabatiro avanoshanda, pamwe nekugadzwa kwakanaka kuitira kuti zvese zvishande zvakakwana.
1 Dzokorora vs. PLC vs. PLC-WiFi
2 Zvimiro izvo zvinofanirwa kuve neWiFi PLC
3 WiFi PLC Kugadziridza
4 Mhedzisiro: WiFi kwese kwese
Dzokorora vs. PLC vs. PLC-WiFi
Kutanga ngatisiyei akati wandei akajeka mazano kuti tizive zvatiri kutaura nezvazvo. Pane nzira dzakawanda dzekuwedzera network yako yekumba, uye tinogona kudzipfupisa mu:
Anodzokorora WiFi Iyo ndiyo inotora chiratidzo cheWiFi uye ndokutumira iyo kumashure, ichiwana kufukidzwa kukuru. Iwo michina ine nyore kumisikidzwa, ine mutengo unodhura uye wakangwara kwazvo, nekuti zvese zvaunoda ipuraki yekuisa. Dambudziko ravanaro nderekuti vanogara vachirasikirwa nehunhu hunoenderana nenzvimbo yaunoisa iwe, saka kana ukaiisa munzvimbo iri kure neiri main router, mhando yechiratidzo chavanogamuchira chakashata, uye nekudaro chiratidzo chekuti vanodzokorora chakatonyanya.
PLC Icho chigadzirwa chinoshandisa network yemagetsi yeimba yako kuwedzera yako internet network. Zvirinani iwe unoda maviri madhijitari, imwe yakabatana neethernet tambo kune main router uye yakavharirwa mune chero magetsi magetsi, uye imwe iyo yakavharira mune imwe nzvimbo iri kure yemagetsi inounganidza iyo chiratidzo uye inoitumira iyo kuburikidza neethernet tambo kune chero chimwe chinhu chinobatanidza kwaari. Zvichienderana nekuiswa kwemagetsi kwauinako, kurasikirwa kwechiratidzo kuchave kukuru kana kushoma, asi vane zvakashata zvekuti havabvumidze kubatana kwewaya, chete kuburikidza neethernet tambo.
A PLC-WiFi Inobatanidza zvishandiso zviviri zvakapfuura: inoshandisa network yemagetsi kuwedzera yako internet network, uye wechipiri anogamuchira anotora chiratidzo ichocho uye anogadzira nzvimbo yekuwana yeWiFi iyo iyo michina inogona kubatanidza zvisina waya.
Iyi graphic inoratidza ine mifananidzo chii iyo PLC-WiFi iri. Sezvauri kuona, chikuru unit chakabatana neethernet tambo kune main router, yakavharirwa mune inoburitsa magetsi (gara uchinanga kumadziro, pasina kuwanda kana chero zvakafanana), uye lIyo satellite unit, yakabatana kune imwe socket, inogamuchira iyo internet chiratidzo uye nekuchinjisa iyo zvisina waya kune mamwe madivayiri. Iyo zvakare inowanzo iine Ethernet socket yekubatanidza chishandiso kuburikidza netambo, kuwana zvirinani kumhanya. Imwe bhenefiti ndeyekuti iwe unokwanisa kubatanidza akati wandei satellite masuniti munzvimbo dzakasiyana kuitira kuti uwane kuwedzera kukuru kwekufukidzwa kweWiFi
Zvimiro izvo zvinofanirwa kuve neWiFi PLC
Iwo akasiyana kwazvo uye ezvese zvinogoneka dhizaini uye nemavara, aine kumhanya zvakanyanya kana kushoma, maviri-bhendi, inoenderana ne802.11ac ... uyezve, mitengo inosiyana zvakanyanya kubva kune imwe ichienda kune imwe. Mune yangu nyaya ini ndasarudza iyo modhi yaunoona mumufananidzo (€ 50 kuAmazon). Iine kumhanya kunosvika 300Mbps inoenderana neIEEE802.11b / g / n standard, uye zvakanyanya kukosha, kugona kuumbiridza netiweki yako.
Nei izvi zvakakosha? Ini ndoda kuchengetedza imwechete network pamba (Luis's Network), kwete seyakajairika vanodzokorora vanogadzira netiweki nyowani yako (Luis X's Network). Haasi ese marongedzero erudzi urwu anokwanisa kuzviita, saka tarisa iwo maratidziro ayo ekuumbiridza akaverengerwa. Chii chandinowana pane izvi? Zvakanaka, zvishandiso zvangu zvinobatana kune imwechete network, uye chingotora iyo ine yakanakisa kufukidza zvichienderana nekwandiri. Kubatana kune maviri akasiyana ma network kune zvakashata kana zvasvika pakugovana mafaera, semuenzaniso.
Zvimwe zvese zvinotsanangurwa zvinofanirwa kutsamira pane zvaunoda. Zviripachena kuti zvirinani mafanera, zvirinani iyo PLC, asi funga nezve kana uchazotora mukana nazvo, nekuti iyo yakapusa chokwadi ndeye mbiri-bhendi (2,4 uye 5 GHz) inogona kupeta mutengo wayo.
WiFi PLC Kugadziridza
Icho chiri nyore kwazvo, kana zvirinani chinofanira kuve. Chaizvoizvo inyaya yekuvharidzira iyo inotumira mune yekubuda magetsi uye kuibatanidza kuburikidza neethernet kune main router. Wobva wabatanidza satellite kune chimwe chiteshi munzvimbo yaunowana kufukidzwa kwakashata uye zvese zvichapotsa zvaitwa. Neiyi nzira iwe unenge uine imwe netiweki yeWiFi kupfuura iyo hombe, iyo sekukuudza kwandaita hazvisi izvo zvandaitsvaga. Iyi TP-Link modhi ine bhatani bhatani iro rinofanirwa kuita kuti zvese zvive nyore, asi ini ndine Apple's AirPort Yakanyanyisa seiri main router, iyo inongobvumidza WPS kubatanidza maprinta, saka ini ndaifanira kutendeukira kune manyorerwo ekugadzirisa.
Hakusi kuti kwakaomarara kana, asi zvainge zvakandiomera kuwana mhinduro. Iwe unofanirwa kurodha pasi pegadziriro yekushandisa iyo iwe unayo yepamutemo TP-Link webhusaiti (pano) uye uwane iyo yekumisikidza menyu yeiyo PLC-WiFi. Iwe unofanirwa kuve unofambidzana neiyo PLC kuburikidza neethernet tambo kana kune iyo WiFi netiweki yawakagadzira (iyo password iri pane chinamira icho PLC inayo). Iwe unofanirwa kuwana iyo «Wireless» menyu uye shandura zita reWifi network (SSID) kune zita renetiweki yako huru, kuremekedza mavara makuru, madiki, hyphens, nzvimbo, nezvimwe.
Iye zvino mukati me «Chengetedzo» menyu chinja password uye woisa chaizvo zvakafanana zvaunazvo mune main router. Iwe unenge watove neyako cloned WiFi network uye zvishandiso zvako hazvizove nechinetso kubatanidza kune iyo inogadzirwa neiyo router kana iyo inogadzirwa neiyo PLC-WiFi zvichienderana neyakafukidzwa.
Mhedzisiro: WiFi kwese kwese
Zvinonyengera kufunga kuti isu tichava neiyo imwechete yekubatanidza kumhanya neiyi yakapetwa network senge netiweki iyo main router inogadzira. Ndine 300Mb yekubatanidza, iyo yekumhanyisa isina matambudziko akabatana kuburikidza neWiFi mumba yekutandarira, pane iyo router. Zvisinei, mukicheni, kwandakaisa iyi PLC-WiFi, uye iri kune imwe nzvimbo yekupedzisira kweimba "chete" ndinowana 30Mb pane yangu iPhone uye ingangoita 50Mb paMacBook yangu. Kunyangwe kurasikirwa kwekumhanya mukuita, izvi zvinoreva kuti ndinogona kutamba chero zvemukati mukushambadzira kana nekukurumidza kurodha chero chishandiso. kubva kune kumwe kunoperera imba yangu, uko kusvika parizvino ndaitambura kucheka nekumhanyisa dzimwe nguva zvichishatirisa. Kwandiri iyi yakazopedzisira yave mhinduro, ndinovimba inokubatsira iwewo.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » Zvidzidzo uye zvinyorwa » Maitiro ekuvandudza yako yekumba WiFi kufukidza uchishandisa WiFi PLC
Ndine chishandiso chakafanana chakaiswa, uye chinoshanda zvakanaka. Haisi imwe yeakanakisa, asi inoenderana nemazvo. Uye zvakare, inogadziriswa nyore nyore neWPS.
Apple inoda kuti chitoro chekutanga cheIndia chive chiratidzo
Kutanga unboxing yeiyo 9,7-inch iPad Pro